WARBIXIN: Xaqiiqooyinkii Laga Diiwaangeliyay Kulamadii Ay Badiyeen Kooxaha Arsenal, Man City & Liverpool Iyo Kulankii Barbaraha Ay Gashay Manchester United. | Haqabtire News
WARBIXIN: Xaqiiqooyinkii Laga Diiwaangeliyay Kulamadii Ay Badiyeen Kooxaha Arsenal, Man City & Liverpool Iyo Kulankii Barbaraha Ay Gashay Manchester United.
Shirkada uruurisa xaqiiqooyinka kubada cagta ee Opta ayaa soo saartay xaqiiqooyinkii ugu xiisaha badnaa ee laga uruuriyay kulamadii ugu waa weynaa ee shalayto la ciyaaray horyaalka Premier League ah.
Sunderland ayaa kaliya labo dhibcood ka heshay 10kii kulan ee ugu horeysay xilli ciyaareedka Premier Leageu (farqiga goolasha -13), waana bilowgii ugu xumaa abid ee xilli ciyaareedka Premier League (Man City ayaa sidoo kale dhibcood heshay waqtigaan oo kaliya xilli ciyaareedkii 1995-96 laakiin farqigooda goolasha ayaa fiicnaa)
Xaqiiqdiina, tani waa bilowgii ugu xumaa abid ee taariikhda Sunderland ee heer kasta oo horyaal ah.
Alexis Sanchez ayaa si toos ah ugu lug lahaa sideed gool sideedii kulan ee ugu danbeysay Premier League (shan gool, seddex caawin).
22 baasas ayaa la sameeyay ka hor goolkii uu hogaanka ugu dhiibay Arsenal Alexis Sanchez, waana baasaskii ugu badnaa ee la sameeyya gool Premier League ah xilli ciyaareedkan.
Olivier Giroud ayaa dhaliyay todobo gool, todobadii kulan ee ugu danbeysay ee uu ka horyimid Sunderland tartamada oo dhan, iyadoo labada gool uu dhaliyay shalayto ay ka timid labadii taabasho ee ugu horeysay ee ciyaarta.
Manchester United ayaa heshay 37 darbo kulankaan, waana darbooyinkii ugu badnaa ee ay helaan kulan Premier League ah tan iyo 2003-04.
Ander Herrera ayaa la siiyay casaankiisii ugu horeysay ee Premier League isagoo shan jeer casaan ku qaatay La Liga.
Markii ugu danbeysay ee Manchester United casaan lagu siiyo Old Trafford kulan Premier League ah waxa ay aheyd bishii September 2014 (Wayne Rooney v West Ham).
Goolhaye Tom Heaton ayaa sameeyay 11 badbaadin kulankaan, waana badbaadintii ugu badneyn ee uu goolhaye sameeyo xilli ciyaareedkan Premier League, isla Heaton ayaa 11 badbaadin sameeyay kulankii ay la ciyaareen Burnely kooxda Southampton.
Zlatan Ibrahimovic ayaa waxaa soo martay lix kulan oo horyaal ah uusan gooldhalinin waana markii ugu horeysay ee ay taasi ku dhacdo tan iyo bishii December 2007 markaasoo uu joogay Inter Milan.
Ibrahimovic waxa uu helay 12 darbo kulankaan, waana darbooyinkii ugu badnaa ee uu ciyaaryahan helo Premier League iyo tan iyo Robin van Persie markii uu joogay Arsenal kulan ay la ciyaareen Wolves bishii December 2011.
Manchester United ayaa badisay kaliya hal kulan todobadii kulan ee ugu danbeysay ee Premier League. (Seddex barbaro, seddex guuldarro).
West Brom waxaa laga badiyay 10kii kulan ee ugu danbeysay Premier League ee ay ka horyimaadeen Manchester City iyadoo mudadaas laga dhaliyay 28 gool.
Sergio Aguero ayaa dhaliyay todobo gool sagaalkii kulan ee horyaalka ee uu ka horyimid West Brom.
Aguero ayaa sidoo kale dhaliyay lix gool afartii kulan ee ugu danbeysay ee Premier League ee ay marti ahaayeen.
City ayaa shabaqa ilaashatay sideed ka mid ah 13kii kulan ee ugu danbeysay ee ay ka horyimaadeen horyaalka West Brom.
Liverpool ayaa dhalisay afar gool ama ka badan kulan Premier League ah markiisii sideedaad sannadkaan 2016.
Kooxda Reds ayaa dhalisay 79 gool oo horyaalka ah tan iyo markii uu Jurgen Klopp kooxda macalin ka noqday, waana in ka badan ugu yaraan seddex gool koox kasta oo ka ciyaarta Premier League.
Waxaa u dhaxeysay shan daqiiqo iyo 45 ilbiriqsi seddexdii gool ee ugu horeysay ee ay iska dhaliyeen Crystal Palace iyo Liverpool.
Kulankaan waxaa sidoo kale la iska dhaliyay shan gool qeybtii hore, waana goolashii ugu badnaa ee la iska dhaliyay 45tii daqiiqo ee ugu horeysay kulan Premier League ah xilli ciyaareedkan.
Phillipe Coutinho ayaa caawiye ka noqday labo ama ka badan kulan horyaalka ah muddo lix jeer ah tan iyo markii uu saftay kulankiisii ugu horeysay.